Karịa Search Engine Optimization | Martech Zone
Nyaahụ, emere m ọzụzụ na njikarịcha njin ọchụchọ ma kpọọ ndị na-emepụta ihe, ndị na-ede akwụkwọ, ụlọ ọrụ na ọbụlagodi ndị asọmpi ịbịa ọzụzụ ahụ. Ọ bụ ụlọ zuru oke ma gaa nke ọma.
Ntinye na engines ọchụchọ abụghị azịza ya mgbe niile - ụlọ ọrụ ga-enwerịrị ọdịnaya dị irè, saịtị dị mma, yana ụzọ ha ga-esi soro ụlọ ọrụ ahụ rụọ ọrụ.
Ana m eche onwe m dị ka ọkachamara njikarịcha search engine. Maka imirikiti ụlọ ọrụ, enwere m ike ịkwalite saịtị ha ma ọ bụ nyiwe ha, nye ha ozi gbasara etu esi eme nyocha isiokwu, ma gosi ha otu esi ewepụta ọdịnaya ahụ n'ụzọ ga-ahụ na achọtara ha ebe ha chọrọ.
Ka ị na-ele anya n'ime nzukọ gị na mbọ gị Nchọpụta Ngini Nchọgharị, enwere ihe nloghachi maka gị. Achọghị m ịma otú ihe ị na-agụ online banyere SEO, onye ị kwere, ihe ị na-eche na ị maara… ị na-enweghị ihe ọ na-ewe iji bugharịa agịga mgbe a ụfọdụ ihe. Ọtụtụ ndị ahịa mụ na ha rụkọrọ ọrụ nwere ọkachamara SEO kachasị mma maka obere mkpụrụedemede - mana anaghị atụgharị atụmanya mere n'ezie na saịtị ha.
Ọ bụrụ n’inweghị ego iji jiri ụlọ ọrụ ama ama, kwusi imebi ya. Enwere otutu uzo ozo iji di elu na asọmpi di elu, olu di elu:
Could nwere ike ị na-elekwasị anya ogologo-ọdụ, isiokwu ndị dị mkpa karị nke na-emeziwanye mgbanwe ntụgharị gị n'ihi na ha na-eduga n'ọtụtụ dị nta nke atụmanya ka mma.
You nwere ike imeziwanye atụmatụ nke saịtị gị ka ị pụta dị ka ọkachamara, ntụkwasị obi na-atụkwasị obi, imeziwanye oku na-arụ ọrụ, na ibe ọdịda - na-eme ka ọnụego mgbanwe niile gbanwee.
Nwere ike igbanwe ọdịnaya gị na imezu ya otutu-ule di iche-iche, ule / b / n na nyocha-kewa iji melite ọnụego ntụgharị nke atụmanya ndị na-ahapụ saịtị gị.
Could nwere ike imeziwanye aha peeji gị na nkọwapụta meta iji melite mkpa nke ibe nsonaazụ ọchụchọ gị (SERP) ka ọtụtụ ndị ọrụ injinia ihe nchọgharị pịa ntinye gị na peeji nsonaazụ. Lelee nke gi pịa-site na ọnụego na Google Webmaster Central.
Nwere ike iji mgbasa ozi mmekọrịta na azụmaahịa email rụọ ọrụ nke ọma iji tinye aka, re-na-ewute ndị ahịa gị - na-eme ka nsonaazụ azụmaahịa zuru oke.
Search engines abụrụla ihe dị oke egwu maka ụlọ ọrụ na-ebuga usoro ịre ahịa inbound… mana nke a apụtaghị na ị kwesịrị iji akụ gị niile na-anwa ịpịa ounce ikpeazụ ọ bụla. Ikwesiri itinye ike zuru oke iji soro usoro kachasị mma, ma jiri oge agbakwunye gị nke ọma. Ọ bụrụ na ogo maka isiokwu kachasị asọmpi bụ naanị nhọrọ gị ma ọ bụ nwee ọtụtụ nloghachi na itinye ego, tinye ego na a njikarịcha njikwa search engine dị ka nke anyị, DK New Media. Ọ bụrụ nloghachi na ego adịghị ebe ahụ, gbado anya gị na usoro ndị ọzọ ga - eme ka nsonaazụ azụmaahịa gị dum bawanye.
Tags: content Marketingemail MarketingKeywordsogologo-ọdụ Keywordsnkọwa nke metaaha peejielekọta mmadụ mediaweb imewe
Enwere olile anya na ụfọdụ ndị mmepe web websaịtị ahụ bịara mụtara ihe ole na ole. Ọ dịghị ihe dịka ịgbaga na weebụsaịtị ndị na-eri ọnụọgụ 5 nke ndị ahịa na-enweghị aha peeji ma ọ bụ nkọwa meta emere nke ọma, ma ọ bụ nwere ọtụtụ ụlọ URL. Ọzọ ihe… website na-ewu ndị mmadụ, adịghị ewu ma ọ bụ rehab a website enweghị eme isiokwu nnyocha ma ọ bụ ka mmadụ mee ya. Ọ bụ okwu metụtara ịdị uchu.